Sarefat Okunafo ne Odiyifo Elia | Nea Mmofra Betumi Asua Afi Bible Mu
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Cinyanja Croatian Cuban Sign Language Czech Dangme Danish Dayak Ngaju Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Madagascar Sign Language Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Miskito Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Swiss German Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Okunafo Bi Babarima San Baa Nkwa Mu
Bere a ɔpɛ sii no, Yehowa ka kyerɛɛ Elia sɛ: ‘Sɔre kɔ Sarefat. Wokɔ hɔ a, okunafo bi bɛma wo aduan.’ Elia duu kurow no pon ano no, ohuu okunafo hiani bi sɛ ɔresesa nnyina anaa nnua a ɔde bɛsɔ gya. Ɔsrɛɛ no sɛ ɔmma no nsu kakra nnom. Bere a ɔbaa no rekɔsaw nsu no aba no, Elia frɛɛ no ka kyerɛɛ no sɛ: ‘Mesrɛ wo, fa paanoo kakra brɛ me.’ Nanso okunafo no ka kyerɛɛ no sɛ: ‘Minni paanoo biara a mede bɛma wo. Esiam ne ngo kakraa bi na aka a me ne me babarima de bɛyɛ aduan kakra adi.’ Elia ka kyerɛɛ no sɛ: ‘Yehowa ahyɛ bɔ sɛ, sɛ woto paanoo ma me a, esiam a wowɔ ne wo ngo no rensa da kosi sɛ nsu bɛsan atɔ.’
Enti okunafo no kɔɔ fie kɔtoo paanoo maa Yehowa diyifo no. Sɛnea Yehowa hyɛɛ bɔ no, ampa okunafo no ne ne ba no aduan no ansa da wɔ ɔpɛ bere no mu. Esiam a na ɛwɔ ɔbaa no kuku mu ne ne ngo no, ɛso antew da.
Akyiri yi, asɛm bɔne bi sii. Yare kɛse bi bɔɔ okunafo no ba abarimaa no maa no wui. Okunafo no srɛɛ Elia sɛ ɔmmoa no. Elia gyee abofra no fii ne maame nsam, na ɔde no foro kɔɔ abansoro dan bi mu wɔ ɔbaa no fie. Elia de abofra no too mpa so, na ɔbɔɔ mpae sɛ: ‘Yehowa, mesrɛ wo ma abofra yi mmra nkwa mu bio.’ Sɛ Yehowa nyan abofra no a, wunim nea enti a na ɛbɛyɛ nwonwa? Efisɛ ɛde besi saa bere no, na obiara nwui a wasan aba nkwa mu bio. Afei nso, na okunafo no ne ne babarima no nyɛ Israelfo mpo.
Nanso abarimaa no nkwa san baa ne mu bio, na ɔhyɛɛ ase homee! Elia ka kyerɛɛ okunafo no sɛ: ‘Hwɛ! Wo ba no asan aba nkwa mu.’ Ɔbaa no ani gyee yiye, na ɔka kyerɛɛ Elia sɛ: ‘Woyɛ Onyankopɔn nipa ampa. Nea enti a mereka saa ne sɛ, nea Yehowa bɛka sɛ ka no, ɛno nko ara na woka.’
“Monhwɛ sɛ nkwaakwaadabi ngu aba na wontwa, na wonni adekoradan anaa asan, nanso Onyankopɔn ma wɔn aduan. Mpɛn ahe ara na monsom bo nsen nnomaa?”​—Luka 12:24
Nsɛmmisa: Okunafo a ɔwɔ Sarefat no, dɛn na ɔyɛ de kyerɛɛ sɛ ogye Yehowa di? Yɛyɛ dɛn hu sɛ na Elia yɛ Onyankopɔn diyifo ampa?
1 Ahene 17:8-24; Luka 4:25, 26
Ade biako bi wɔ hɔ a yebetumi aka sɛ ɛhyɛɛ ɔbea no gyidi den paa. Ɛno ne ne ba no a odiyifo no nyan no no. Dɛn na yebetumi asua afi n’asɛm no mu?